Kulankii ugu horeeyey ee looga hadlayey Ammaanka oo Beledweyne ka dhacay, kadib markii… | Baydhabo Online
Kulankii ugu horeeyey ee looga hadlayey Ammaanka oo Beledweyne ka dhacay, kadib markii…
Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan barkhanimadii maanta waxaa gaaray Safiirka Dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xuseen Aadan, Taliyaha Ciidanka Jabuuti iyo saraakiil ciidan.
Wafdigan ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka, waxaana intaa kadib ay kormeer ku tageen xarumaha Ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin Magaalada Beledweyne.
Safiirka Dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xuseen Aadan, Taliyaha Ciidanka Jabuuti iyo saraakiisha Ciidan ee maanta gaaray Beledweyne ayaa intaa kadib waxa ay sheegeen in wax badan laga qaban doono xaalada amni ee xerooyinka Ciidanka Jabuuti ay ku leeyihiin Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiraan.
Dhanka kale Gudoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo shalay uu magacaabay Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa maanta kulan amniga looga hadlayay waxa uu la qaatay saraakiil Ciidan, waxaana uu kala hadlay xaalada amni ee Gobolka Hiiraan.
wuxuu sheegay Ciidanka Dowladda iyo kuwa AMISOM ee Gobolka Hiiraan in looga baahan yahay in ay si wadajir ah isaga kaashadaan sugidda amniga.